Resaky ny mpitsimpona akotry : very vakana fa tsy very anjara | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : very vakana fa tsy very anjara
Nandalo fotoan-tsarotra ny firenena taona maromaro, nizaka ny vokatr’izany ny ankamaroan’ny mponina, na nisy aza nanam-bintana sy fahaiza-miala ka nahita rirany ampisondrotana ny fari-piainany. Tsy rariny anefa raha toa mitombo hatrany ny fanavakavahana ka manao modimody fotsiny fomba fanamaivanana ny fahorian’ireo latsaka lalina dia mbola angataka fahaiza-miharitra amin’ny marobe izay efa tototra. Lazaina fa mandeha miandalana ny zava-drehetra, hany tazana anefa dia toa tsy mikisaka akory fa ny omaly ihany no iainana ny ampitso aiza moa no tsy ho tonga ny fahatsapana ny fitombon’ny havesatry ny fahasahiranana.
Raha firavaka aloha no resaka dia afaka lazaina fa dia very vakana ny nosy, na izany aza dia tsy azo atao hoe very anjara. Io izao efa mandondona ny fampiantranoana ny Fivoriana an-tampon’ny Fikambanambe atao hoe “Francophonie”. Ny fahaizana manomana ny fanatanterahana izany arak’izay kely an-tanana hanajana ny vahiny amin’ny fanajana tena, dia tsy vitany fotsiny ho ravaka fa mety hampisokatra varavarana sy lalana ahafahana mitrandraka tombontsoa. Ny fampiantranoana olona maro avy any amin’ny vazantany eran-tany toy izao dia ifandroritana noho ny vokatra azo sintonina avy aminy. Sao sanatria ny tena indray no hanao toy ny ranon’Ikopa ka tonga namana vao miha mavomavo.
Tsy afaka hanolotra ny tsy ananana moa na izany aza tsy vitavita foana na ho atao ady koropaka fara fotoana ny fandraisana olona aman’arivony.
Fantatra fa eto an-toerana noho ny fanarenana tsy maintsy atrehina dia mifanosona ny fibahanan’ny ady mahamaika sy ny laharan’ny asa mahamehana. Anjaran’ny fitondrana ny fandrariana ny fiantsorohana ny adidy maro karazana izay mbola tovanan’ny fanomanana ity Fivoriana an-tampony ity, tsy atao ho filoloha siny roa akory fa kajina toy ny fiterena ronono ririnina atao izay tsy ampahihy ny reniny tsinjonvina ny tsy ahafaty ny zanany.
Azo inoana fa any ambadika any efa mavitrika ny fanatanterahana ny tetika mipetraka eo amin’ny fanomanana, tsy henoheno anefa ny akony fa mbola ny adiady pôlitika ihany toy ny fananganana ilay CENI no mibahana. Io fampiantranoana io anefa dia mitaky avy amin’ny vahoaka manontolo ny fahatsapana fa samy tompontrano daholo ny rehetra fa tsy mpitazana fotsiny ny vahoaka. Ilàna fanentanana maharitra izany mba samy ho vonton’ny adidy mikasika izany ny tsirairay. Na atao fotsiny aza fa na eo ilay fahantrana izay tsy hita ho afenina dia tsy atao koa ho deraderaina amin’ny fitafiana voronkitsahy, na amin’ny fampisehoana toetra tsy ampy fanajana tena toy ny famanizana lany henatra ampahibemaso eny antsisin’ny arabe.